ချစ်သူသက်တမ်း ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer - Cele Connections
ချစ်သူသက်တမ်း ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer
Alpha & | 27/10/2019 | Celebrity | No Comments
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်မှုတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီးအားကျစရာကောင်းတဲ့ အချစ်ရေးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အနုပညာရှင်ဆယ်လီစုံတွဲလေးတွေထဲမှာ အဆိုတော်လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer တို့စုံတွဲလေးကလည်း အပါအဝင်ပါပဲ..။ ဂီတလောကမှာပရိသတ်တွေအားကျချစ်ခင်ရတဲ့ အနုပညာရှင်ဆယ်လီစုံတွဲလေးဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer တို့ကတော့ ချစ်သူသက်တမ်း (၁၀) နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ ပရိသတ်ကြီးရေ ..။
ဒီနေ့မှာတော့ “သူ့ ခမျာလည်း မျောက်ကဲမလေး ၁ကောင်ကို ပေါက်စနမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ထဲက လိုက်ထိန်းပေးခဲ့တာ ၁၀စုနှစ်၁ခုတောင်ကျော်လာခဲ့ပြီ ! (တည်ငြိမ်သူကိုဘာတွေလိုက်စနေမှန်းမသိ ) ” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ Bobby Soxer က ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စုံတွဲအမှတ်တရ ပုံရိပ်တွေကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ လွန်ခဲ့တဲ့ မေလ ၁၈ ရက်နေ့က ချစ်သူသက်တမ်း ၁၀ နှစ်ပြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် ချစ်သူသက်တမ်း ဆယ်နှစ်ကျော်ကာလ တစ်ခုကို ဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ။ ဆယ်စုနှစ်တစ်စု တိုင်အောင် အကြင်နာမပျက်ဘဲ ချစ်ခင်စွာလက်တွဲ ကျော်ဖြတ်လာခဲ့ကြတဲ့ သူတို့စုံတွဲကို ပရိသတ်တွေအားလုံးက မင်္ဂလာပွဲလေး ကျင်းပတာကိုမြင်ချင်နေကြပါပြီ ။
ပရိသတ်တွေမြင်စေချင်သလို ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်လို့ ခဏလောက်စောင့်ပေးပါဦးလို့လည်း လွှမ်းပိုင်က ပရိသတ်တွေကို မေတ္တာရပ်ခံထားတာ အားလုံးသိမှာပါ ။ လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer တို့ရဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော် မြဲလာတဲ့ တွဲလက်တွေ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာတိုင်အောင် မြဲမြံကြပါစေလို့ Cele Connections မှဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ Cele Connections ချစ်ပရိသတ်ကြီးကလည်း ဒီစုံတွဲလေးအတွက် ဆုတောင်းစကားလေးတွေ ရေးပေးခဲ့ပါဦး ။
Source : Htet Htet Aung
ခဈြသူသကျတမျး ဆယျစုနှဈတဈခုကြျောခဲ့ပွီဖွဈတဲ့ လှမျးပိုငျနဲ့ Bobby Soxer
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျနားလညျမှုတှနေဲ့ ပြျောရှငျစရာကောငျးပွီးအားကစြရာကောငျးတဲ့ အခဈြရေးလေးကိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့ အနုပညာရှငျဆယျလီစုံတှဲလေးတှထေဲမှာ အဆိုတျောလှမျးပိုငျနဲ့ Bobby Soxer တို့စုံတှဲလေးကလညျး အပါအဝငျပါပဲ..။ ဂီတလောကမှာပရိသတျတှအေားကခြဈြခငျရတဲ့ အနုပညာရှငျဆယျလီစုံတှဲလေးဖွဈတဲ့ အဆိုတျောလှမျးပိုငျနဲ့ Bobby Soxer တို့ကတော့ ခဈြသူသကျတမျး (၁၀) နှဈကြျောခဲ့ပါပွီ ပရိသတျကွီးရေ ..။
ဒီနမှေ့ာတော့ “သူ့ ခမြာလညျး မြောကျကဲမလေး ၁ကောငျကို ပေါကျစနမွီးကောငျပေါကျအရှယျထဲက လိုကျထိနျးပေးခဲ့တာ ၁၀စုနှဈ၁ခုတောငျကြျောလာခဲ့ပွီ ! (တညျငွိမျသူကိုဘာတှလေိုကျစနမှေနျးမသိ ) ” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ Bobby Soxer က ခဈြစရာကောငျးတဲ့ စုံတှဲအမှတျတရ ပုံရိပျတှကေို ပရိသတျတှကေိုမြှဝပေေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ လှနျခဲ့တဲ့ မလေ ၁၈ ရကျနကေ့ ခဈြသူသကျတမျး ၁၀ နှဈပွညျ့ခဲ့တာဖွဈပွီး အခုဆိုရငျ ခဈြသူသကျတမျး ဆယျနှဈကြျောကာလ တဈခုကို ဖွတျကြျောလာခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ ။ ဆယျစုနှဈတဈစု တိုငျအောငျ အကွငျနာမပကျြဘဲ ခဈြခငျစှာလကျတှဲ ကြျောဖွတျလာခဲ့ကွတဲ့ သူတို့စုံတှဲကို ပရိသတျတှအေားလုံးက မင်ျဂလာပှဲလေး ကငျြးပတာကိုမွငျခငျြနကွေပါပွီ ။
ပရိသတျတှမွေငျစခေငျြသလို ကွိုးစားနဆေဲဖွဈလို့ ခဏလောကျစောငျ့ပေးပါဦးလို့လညျး လှမျးပိုငျက ပရိသတျတှကေို မတ်ေတာရပျခံထားတာ အားလုံးသိမှာပါ ။ လှမျးပိုငျနဲ့ Bobby Soxer တို့ရဲ့ ဆယျစုနှဈတဈခုကြျော မွဲလာတဲ့ တှဲလကျတှေ နှဈပေါငျးတဈရာတိုငျအောငျ မွဲမွံကွပါစလေို့ Cele Connections မှဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော ။ Cele Connections ခဈြပရိသတျကွီးကလညျး ဒီစုံတှဲလေးအတှကျ ဆုတောငျးစကားလေးတှေ ရေးပေးခဲ့ပါဦး ။
ကလေး တဈယောကျကွောငျ့ မထငျမှတျထားဘဲ အသညျးကှဲခဲ့ရတဲ့ နနျးသီရိမောငျ
” အနုပညာအလုပ်တွေပြန်လည်စတင်လုပ်ကိုင်ရတာကြောင့် ရှူတင်မှာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး”
” Pageအတုတှနေဲ့ပကျသကျပွီး ရငျဖှငျ့လာတဲ့ ရတနာမိုငျ “
“ပရိသတ်တွေအတွက် စပရိုက်ဖြစ်စေမယ့် အရာလေးတစ်ခုကို မေးခွန်းထုတ်ကာပြောလာတဲ့ ချမ်းချမ်း”